Muxuu Benzema ka yiri kulanka El Clásico ee dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona? – Gool FM
Muxuu Benzema ka yiri kulanka El Clásico ee dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona?
(Madrid) 06 Abril 2021. Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa sheegay in kulanka El Clásico oo ay la ciyaarayaan Barcelona uu noqon doono mid aad u adag, gaar ahaan maadaama labada koox ay jecel yihiin inay kubadda heystaan.
Barcelona ayaa marti ugu noqon doonta Real Madrid Sabtida garoonka Alfredo Di Stefano, waxayna labada kooxood rabaan inay guul gaaraan si ay uga daba tagaan hogaamiyaasha horyaalka La Liga ee Atletico Madrid.
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa kahor kulanka El Clásico wuxuu u sheegay warbaahinta:
“El Clásico waa kulanka ugu weyn aduunka, tanina ma ahan aniga oo kaliya ee qof walba ayaa aaminsan, waa inaan guuleysanaa, kulankaan ayaa loo arkaa inuu noo yahay mid final ah, waxaana filayaa in fursadaheena ay weyn yihiin.”
“Tani waa ciyaar adag, sababtoo ah waxaad ka hor iman doontaa koox jecel kubad haysashada, laakiin sidoo kale waxaan jecel nahay inaan haysano, marka waxaan u maleynayaa in ciyaarta ay inbadan ku koobnaan doonto khadka dhexe ee garoonka.”
“Barcelona waqti badan ayeey heysataa kubadda, waxayna heystaan goolhaye aad u wanaagsan, sidoo kale waxay heystaan Messi, wuxuuna muhiim u yahay kooxda si kastoo ay tahay.”